घरमै बसेर अब सेयर किनबेचको... :: कमल नेपाल :: Setopati
घरमै बसेर अब सेयर किनबेचको आदेश दिन पाइने, कसरी दिने ?
अब लगानीकर्ताले घरमै बसेर सेयर किन्न वा बेच्नको लागि ब्रोकर कम्पनीहरुलाई आदेश दिन पाउने भएका छन्। नेपाल धितोपत्र बोर्डले आजदेखि लागू हुनेगरी अनलाइनबाटै सेयर किनबेचको आदेश दिन सकिने व्यवस्था गरेको छ।
यसअघि सम्बद्ध ब्रोकर कार्यालयमै गई फारम भरेर आदेश दिनुपर्ने वाध्यता थियो। यद्यपी फोनबाट पनि कतिपय ब्रोकरले नियमित लगानीकर्ताको आदेश लिने गर्दथे।
अब कार्यालय तथा घरबाट वा बाटोमा हिँड्दाहिँड्दै पनि इन्टरनेटको प्रयोग मार्फत आवेदन दिन सक्ने छन्। ब्रोकर नम्वर ५० क्रिस्टल कन्चनजंगाबाट यो कार्यको थालनी भएको छ।
अनलाइन आदेश कार्यको उद्घाटन गर्दै नेपाल धितोपत्र बोर्डका अध्यक्ष रेवतबहादुर कार्कीले सबै जिल्लाहरुबाट अब आवेदन दिन सकिने बताए। आउँदै गरेको अनलाइन ट्रेडिङ प्रणालीका लागि यसले मद्दत पुग्ने उनले बताए।
मोबाइलबाटै आदेश दिन पाइने भएकाले लगानीकर्तालाई यसले सहजता दिलाउने ब्रोकर नम्वर ३८ का संचालक विष्णु ओझा बताउँछन्।
५० नम्बरसहित केही ब्रोकर कार्यालयले आजैबाट यसको सुरुआत गरेका छन्। केहीले भने सफ्टवेयर विकासका लागि प्रक्रिया चालेका छन्। आफूहरु सफ्टवेयरको विकासका क्रममा रहेकाले एक दुई दिनभित्रै यो व्यवस्था लागू गर्ने ओझाले बताए। उनले भने ‘सम्भवतः पर्सिबाटै यो व्यवस्था लागू गर्छौँ, एकहप्ताभित्र सबैजसोले यसलाई कार्यान्वयनमा ल्याउलान्।’
कसरी दिने आदेश ?
अनलाइन प्रणालीबाट आदेश दिनका लागि सबैभन्दा पहिले ब्रोकर कार्यालयबाट युजर नेम र पासवर्ड लिनुपर्दछ। ‘हामीबाट कारोबार गर्ने लगानीकर्ताले यहाँ आएर युजर नेम र पासवर्ड लिनुपर्छ’ ओझाले भने ‘अन्य ब्रोकरबाट कारोबार गर्नेले पनि त्यही प्रक्रिया अपनाउने हो।’
ब्रोकरबाट युजर नेम र पासवर्ड लिइसकेपछि सम्बद्ध ब्रोकरको वेबसाइट वा उनीहरुले दिएको लिंक प्रयोग गरी त्यहाँ प्राप्त युजर नेम र पासवर्ड टाइप गर्नुपर्नेछ।
त्यसपछि त्यहाँ एउटा फारम खुल्छ, जुन फारममा किन्न वा बेच्न चाहेको कम्पनी, सेयर संख्या, चाहेको मूल्य लगायतका विवरण भरी सेन्ड गर्नुपर्नेछ। ‘लगानीकर्ताले पठाइसकेपछि हामीले पाउँछौँ, त्यही आदेश कारोबार खुलेका बेला इन्ट्री गर्ने हो’ ओझाले भने।
भुक्तानी वा डिआइएस दिन भने कार्यालय नै धाउनुपर्ने
घरमै बसेर सेयर किन्न वा बेच्न आदेश दिन पाए पनि किनेवापत दिनुपर्ने भुक्तानी रकम र बेचेवापत दिनुपर्ने डिआइएस (डिपोजिटरी इन्स्ट्रक्सन स्लिप) का लागि भने साँझ वा भोलिपल्टै ब्रोकर कार्यालय धाउनुपर्ने व्यवस्था अझै हटेको छैन।
प्राथमिक सेयर भर्दा जसरी लगानीकर्ताको खाताबाटै रकम कटौती हुन्छ, दोस्रो बजारमा भने त्यो प्रणाली विकास हुन अझै सकेको छैन। सेयर किनेवापतको रकम भुक्तानीका लागि चेक दिन ब्रोकर कार्यालय नै जानुपर्ने बाध्यता छ।
‘कारोबार भएदेखि राफसाफ हुँदासम्म घरमै बसेर गर्न पाइयोस्’ लगानीकर्ता पिताम्बर खरेलले भने ‘सेयर किनेवापत हामीले दिने भुक्तानी पनि बैंक खाताबाट काटिने व्यवस्था हुनुपर्यो, बेचेवापत लिनुपर्ने रकम पनि अटोमेटिक रुपमा बैंक खातामै जम्मा हुनुपर्यो।’
त्यस्तो व्यवस्था नभएसम्म कुनै काम अनलाइनबाट गरिए पनि पूर्ण रुपमा सहजता नहुने उनको भनाइ छ। ‘आखिर प्राथमिक सेयर भर्दा बैंकबाटै पैसा काटिने र सेयर नपर्दा खातामै जम्मा हुने व्यवस्था त भएको छ,’ उनले भने ‘त्यस्तै व्यवस्था दोस्रो बजारमा गर्न सकिन्न ?’
त्यस्तै बेचेपछि डिआइएस दिन पनि कार्यालय जानुपर्छ। डिआइएस बैंकको चेकजस्तै सेयरको प्रत्याभूति हो। यो प्रत्याभूति गरिसकेपछि मात्रै बेचेको सेयर डिम्याट खाताबाट कटौती हुन्छ।
प्रकाशित मिति: आईतबार, वैशाख २, २०७५, ०७:११:४०